“Haddii ay ahaan lahayd caruurta Sweden” | Somaliska
"Xisbiga Miljöpartiet iyo dowladu waxay ku balan fureen caruurta ay saameeyeen dagaalada ee loo diiday waalidiintooda" sidaas waxaa qoray xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Sweden ee lagu magacaabo Christina Höj Larsen kana tirsan xisbiga Vänsterpartiet mar ay ka hadlaysay xaalada mideynta reeraha Soomaaliyeed. Christina ayaa wargeyska Aftonbladet ku qortay mowduuc qiiro leh oo ay kaga hadashay arimo badan oo quseeya Soomaalida. "Ka soo qaad haddii adiga iyo caruurta layna kala fogeeyo, adigoo og in ay keligood yihiin cabsina ay ku jiraan. Ma ahan in aadan caruurta rabin in aad la joogto balse waxaa kuu diiday wadanka cusub ee aad timid. Xaaladaas ayay ku jiraan waalidiinta Soomaaliyeed ee Sweden ku nool" ayay qortay Christina. Xildhibaanada ayaa mowduuca ku faahfaahisay sida ay ku timid dhibaatada haysata waalidiinta Soomaaliyed iyadoo ka warantay go,aankii ugu dambeeyay ee maxkamada Socdaalka ay soo saartay. Waxay is waydiisay sida wadan waqti dheer dagaal ka socday loo dulsaari karo shuruuda ah in qofkasta uu aqoonsigiisa cadeeyo? Christina Höj Larsen ayaa sheegtay in xisbigeeda Vänsterpartiet ay dalbanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo bandhigaan xisbiga MP iyo Dowlada xal ku aadan arintaan baarlamaanka Sweden ugu dambeyn bisha September. Waxa ay sheegtay in heshiiskii dowlada iyo xisbiga MP ay ku jirtay in arintaan xal loo helo balse ilaa hada aysan waxba dhicin. Waxay sheegtay in xisbigeeda ay cadeynayaan in xuquuqda mideynta caruuta iyo waalidiintooda ay ka sareyso dhamaan shuruudaha kale sida cadeynta aqoonsiga. Christina ayaa sheegtay in hadalkii ahaa Soomaalida ayaa caruurta ka ganacsata ee uu sheegay Wasiirka Socdaalka Tobias Billström uusan sal lahayn oo xitaa ururada la dagaalama arintaas ay sheegeen in aysan waxba ka jirin. Christina ayaa cadeysay in aan la sugi karin waqti dheer oo dowlada ay ka dalbaneysa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax uga badasho sharciyada. Wax ka qatarsan ma jiraan in caruurtu ay ku noolaadaan waalidiin la'aan. Waa in shuruuda cadeynta aqoonsiga meesha laga saaraa ayay dalbatay. Ugu dambeyntii ayay Christina ku soo gabangabaysay mowduuceeda in xisbiga Miljöpartiet iyo dowlada ay masuuliyad ka saarantahay xaalada 1500 oo ah caruurta Soomaaliyeed ee waalidkood loo diiday. Ma sidaas ayaa ku sameyn lahaydeen hadday ahaan lahaayeen caruur Swedish ah? ayay waydiisay. Dhinaca kale Hanna Löfqvist oo xisbiga Vänsterpartiet u qaabilsan xaga saxaafada ayaa ii sheegtay in ay xareeyeen mooshin ku saabsan arintaan oo ay ku dalbanayaan in la mideeyo reeraha Soomaalida.
“Xisbiga Miljöpartiet iyo dowladu waxay ku balan fureen caruurta ay saameeyeen dagaalada ee loo diiday waalidiintooda” sidaas waxaa qoray xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Sweden ee lagu magacaabo Christina Höj Larsen kana tirsan xisbiga Vänsterpartiet mar ay ka hadlaysay xaalada mideynta reeraha Soomaaliyeed.
Christina ayaa wargeyska Aftonbladet ku qortay mowduuc qiiro leh oo ay kaga hadashay arimo badan oo quseeya Soomaalida. “Ka soo qaad haddii adiga iyo caruurta layna kala fogeeyo, adigoo og in ay keligood yihiin cabsina ay ku jiraan. Ma ahan in aadan caruurta rabin in aad la joogto balse waxaa kuu diiday wadanka cusub ee aad timid. Xaaladaas ayay ku jiraan waalidiinta Soomaaliyeed ee Sweden ku nool” ayay qortay Christina.
Xildhibaanada ayaa mowduuca ku faahfaahisay sida ay ku timid dhibaatada haysata waalidiinta Soomaaliyed iyadoo ka warantay go,aankii ugu dambeeyay ee maxkamada Socdaalka ay soo saartay. Waxay is waydiisay sida wadan waqti dheer dagaal ka socday loo dulsaari karo shuruuda ah in qofkasta uu aqoonsigiisa cadeeyo?
Christina Höj Larsen ayaa sheegtay in xisbigeeda Vänsterpartiet ay dalbanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo bandhigaan xisbiga MP iyo Dowlada xal ku aadan arintaan baarlamaanka Sweden ugu dambeyn bisha September. Waxa ay sheegtay in heshiiskii dowlada iyo xisbiga MP ay ku jirtay in arintaan xal loo helo balse ilaa hada aysan waxba dhicin.
Waxay sheegtay in xisbigeeda ay cadeynayaan in xuquuqda mideynta caruuta iyo waalidiintooda ay ka sareyso dhamaan shuruudaha kale sida cadeynta aqoonsiga. Christina ayaa sheegtay in hadalkii ahaa Soomaalida ayaa caruurta ka ganacsata ee uu sheegay Wasiirka Socdaalka Tobias Billström uusan sal lahayn oo xitaa ururada la dagaalama arintaas ay sheegeen in aysan waxba ka jirin.
Christina ayaa cadeysay in aan la sugi karin waqti dheer oo dowlada ay ka dalbaneysa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax uga badasho sharciyada. Wax ka qatarsan ma jiraan in caruurtu ay ku noolaadaan waalidiin la’aan. Waa in shuruuda cadeynta aqoonsiga meesha laga saaraa ayay dalbatay.
Ugu dambeyntii ayay Christina ku soo gabangabaysay mowduuceeda in xisbiga Miljöpartiet iyo dowlada ay masuuliyad ka saarantahay xaalada 1500 oo ah caruurta Soomaaliyeed ee waalidkood loo diiday. Ma sidaas ayaa ku sameyn lahaydeen hadday ahaan lahaayeen caruur Swedish ah? ayay waydiisay.
Dhinaca kale Hanna Löfqvist oo xisbiga Vänsterpartiet u qaabilsan xaga saxaafada ayaa ii sheegtay in ay xareeyeen mooshin ku saabsan arintaan oo ay ku dalbanayaan in la mideeyo reeraha Soomaalida.
Jimcaaale aad ayaad u mahadsantahay… walaal sidaas noogu soo aruuri xogta. aniga waxaan ka mid ahay waaalidiinta ay carruurtu ka joogto Sweden hawshana raba in ay bilaabaaan dhawaan insha ALLAAH.
asx sxb jimcaale salaan kadib waxaan rabaa inaan kuweydiiyo labo arin! mida 1aad dooda iyo dadaalada socda ma waxay ku koobanyihiin waalidiinta sverige joogta ee caruurtooda wadamada 3aad joogaan!? mise waxa u dhan dhamaan soomaalida kala maqan sida caruur sv jogta ee waalidkood u doodaya. tan 2aad goormey ka hadashay arintan idag igår eller…!?
Waxa loo doodayo waa dhamaan in la mideeyo reeraha Soomaalida sida waalidiinta iyo caruurta iyo dadka isqaba ee aan wax isku dhalin.
Mowduuca waxay qortay maanta.
asc masha allaah waa arin lagu farxo waa sax su aasha ah hadii ay ahaan lahaayeen caruur swedish ah ma sidaas ayaad ku sameyn leheydeen illaaha ka soo yeersiiyey rabigana waa noo hiilin doonaa insha allaah iyadana waxan leeyahey allaah soo hanuuniyo mahadsanidiin
Asc aqii jimcale waxan kuweydina marka hore motion kale muxu so kordina hadi kuwi diiday ay weli hor tagan yihin. Mida 2aad dowlada ma in ay barlamanka ay hor geysa arintan dadkan familada mise ayaga fulin kara. Iga jaahil bixi bro sualahan
Asc aqii jimcale waxan kuweydina marka hore motion kale muxu so kordina hadi kuwi diiday ay weli hor tagan yihin. Mida 2aad dowlada ma in ay barlamanka ay hor geysa arintan dadkan familada mise ayaga fulin kara. Iga jaahil bixi bro sualahan asc
yaab badana somalidu
ASC Somalia waan ka yabay Alah isku midoyo dadka kala maqan lkn waxa la yabay dadki wa wayna haba iska hadlane waa kuwa wadanka gubay kuwi an dowlad arag maxay u daba kacen yurbaha mida wadan no noqon dona somalia wa wadan maha 2 qoys maha 3 qoys maah 100 qoys oo sweden dadka joga dacwad ku keni karo waxan ka yaba marka wax wadanki u samaynaya wax dhaq dhaqa adan arakayn lkn mel ay ayagu awal ba iska xiren aye malin waliba waxay samayn wax laga xishodo yurbo maxa lagu hesta waa ta ubadki kuwi joga ku halabay mise islamka somali waa u cabayad waxad arke gabar somali ah lkn marka eray somali ah ku hadasha ad dareme inay tahay somali lkn marka hore waxad moda itopia way qawan tahay wajiga mela ka duran kuwa hooya dhashay dhalinta inta badan waxa dhagaha ugu jira mp3 music ah hooya dhashay wa la waydina biri mise meqa carura ku jogat kaliya laga raba in lagu fano wale bug aya jira yoma xizab ma hada an dhafin mid yar iyo mid wayn la dhahi dono wane lagu waydin carurta qof shaqeyo ame manta nolol malmed kisa ta somali carur wa ku bilan kara waxe ku nol dad an la bilin lkn Alah umay aye talo sarten maha sida kuwa u maleya inay sweden wax ka bedele nolosheda hada qof adane ah u malaysa inu wax ku hayo ame aminta ina qofla la,anti adan nola karin ogow wagila isaga wax ka sugi somali lkn sida aye noqden inta wanagsan iyo inta xun manta waxa badan inta xun hadi la dhaha shaqo ame waxa lagu dira praktik waxe dhahan wan xanunsanahay hada ka hora mel kaso dhacay dhabarka i buka war wadanka wax ba soma galin oo nolosheda waa tan adunka laggu shekesto wadan 21 sano wax isu qaban is qeymen ya wax u qaaban shalay hade sweden wanag samaysay ya xumeyay ma is waydisen dad wax is falo ganacsi iyo daqli wadanka so galin ma tahin mise been isma qabno aa ku qarabatan ubad xalalku dhashay maxa sxb ku dhalay 1100 kr ogu xarantinimena maxa imanka iyo diinti loga tagay gala ben u shega waa yab waxan u malay jiray wlh in lacag badan ee taahy waxa dadku u kala nol yahay wale wan yabay malinta le yahay waxa ilmaha lagu qada wa inta 4 malin wax la shaqeyay xita ka yar wale somali waax ku dhacay habare Alah so hadeyo wadan ina nahay oo somali qoys ka badan tahane ku xisab tama qof waliba niyadisa Alah siyo 7 qof oo dadka anan ku doranayn aa somalia iga jira ha is dhahin cid kama jirto lkn been iyo ina ALah i tamka yelay aqli iyo cafimad i siyay waxusan u geysan nafteda iyo dhib anan i heysan ina yurub ku dorto labama yabo wadanka dhibka ka jira dadka somlai dhan wa u siman tahay mush inta yurub imaday kaliya wale dad an cid mel u maqnena way jira lkn anigo ogayn malinta la so dona nafta nolosha dhamankeda waa goood swden iyo kronka waa laga taga hadi rabi idme ubad jeceyl somali kuma ogayne Alah kheyrka idin wafajiyo rali noqda somali marke mel isku racda nar ba ha noqote qofka ka rayi duwan wa qaldan wan ogahay tas lkn webka cidi iga lahayn somali ani somali nasib wagansan insha ALah wadan naabada by
Asc ka dib:- Arinteena dhanba sheeko sheeko ayey ka dhigeen iyo isku baas baas xisbiga Miljöpartiet iyo kuwa xukunka iskubahaystay ee alliasen ayaa wax isla meel dhigay, marka tana sheekadii uun bay la mid tahay.Aan isku tashano ayaan qabaa Soomaaliyeey oo mudaaharaadyo aan ku ruxni Sverige meel walba oo aan ka joogno ayaga ayaa si degdeg ah go,aan u gaari doonee,haddii kale war qowda maqashii ah ha nala ku seexiyo oo hurdadeena aan iskaga jirno warkaani waa ra,yi ay qabno xubin baarlamaan sidaas ayaan u fahmay inkastoo uu noo fiican yahay ra´yigaan oo kale.Asc.
Aniga waxay ila tahay in SAVE THE CHILDREN ay advocacy looga sameeyo amaba ay u sameyso iyada si xuquuqda caruurta Somaliyeed ee walidkood kala maqanyihiin ay u helaan xuquuqdooda si Dawaladda Sweden au fulfill gareyso waajibka ka saaran qaanuunka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka iyo alien act-ga ay sameysteen.
asc shukran jimacaale waan shallah waxaad soo aruurisay war lagufarxo ajar alaha kaasiiyo ilaahay waxaan karajeynayaa in ilaahay kuguuleeyo fikrada wasiirada christina somalidana waxaan kulatalin lahaa markasta in aysan kadaalin baryada alle insha allah waan gaaridoonaa guul hadii ayqayrnootahay alaha naguguuleeyo insha allah
asc manshallah jimcaale waxad soo aruurisay war lagurafxo ilaahay waxaan karajeynayaa in uukuguuleeyo wasiirada figrateeda anagana haday qayr nootahay alaha noogasooqaado waayo way adagtahay nolasha caruur waalid la aana oon hadana kunoolayn meel aan nabad ahayn soomaalidana waxaan kulatalin lahaa yaan lagacaajisin baryada ale isagaa wax nasiin kara waxuunasiiyana cid nagama hor istaagikarto
qayr badan laha kusiiyo jimcaale hakadaalin war bixinta aad noosoo aruuriso igana raali noqo waxaan kuqaldanahay figradayda
waxaa laga rabaa in ayna ka daalin sidii ololaha mideynta dadka kala maqan ay u meel mari lahayd loona soo jiito indhaha xubnaha barlamanka iyo xukumadaba ee ay iyaga ka go’do arrinta ,sababta oo ah hadii indhaha saxaafada ay ku soo jeediyaan loona arko in ay tahay xadgudub, waxaa cad in arrintan miro dhal noqon toonto , marka aniga waxaan ku talinayaa in aan la daalin ololahan la sii balaariyo furshaantana la hordhigto aqalka baarlamanka, banaanbaxyo qorsheeysan oo aad looga soo shaqeeyayna la bilaabo.
Mahadsanidiin bahda Somaliska
liban ahmaed says:
walaal waad mahadsantahay jimcaale sida aad noogu soo ururiso xogta gaaladana ilaah hanooga soo qaado waxaa aan ka rabno hana la badiyo baryada alle waan gaari doonaa inshaa,alaah